Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Caribbean » Ukhenketho lweCaribbean luSungula iNethiwekhi yoLuntu
Iindaba zeBarbados Breaking • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
I-CTO isungula iNethiwekhi yoKhenketho yoLuntu
Umbutho wezoKhenketho kwiCaribbean (i-CTO) usungule i-Caribbean Community Tourism Network (CCTN) ukubonelela ngeqonga lokuxhasa uphuhliso oluqhubekayo lwe-CBT kwiCaribbean. Abasemagunyeni kuphuhliso lweemveliso zokhenketho kwingingqi yeCaribbean ngoku banesixhobo abanokuzisebenzisa xa bephuhlisa iinkqubo zabo ezisekwe eluntwini (i-CBT).
Uthungelwano luya kubonelela ngeqonga lokuxhasa uphuhliso oluqhubekayo lokhenketho olusekwe eluntwini kwingingqi.
Uthungelwano luya kuququzelela ukutshintshiselana kweyona misebenzi mihle phakathi kwamazwe angamalungu e-CTO kunye namaqabane anomdla kuphuhliso lokhenketho.
Iya kunceda ekuchongeni iimfuno zokwakha amandla kunye nemingeni kunye namathuba ophuhliso lwe-CBT.
"Ukhenketho olusekwe ekuhlaleni lubonelela ngethuba lokuvala umsantsa wentlalo noqoqosho wabantu basekuhlaleni, luvumela amalungu oluntu indlela eya kubomi obuzinzileyo, kwaye ngumjelo wokuthatha inxaxheba kunye nokuxhotyiswa kwabantu basekuhlaleni kwezokhenketho," utshilo u-Amanda Charles, Ingcali yezokhenketho yeCTO. "Le nethiwekhi ibonelela ngamalungu eCTO ukuba abelane ngolwazi, izixhobo, kunye neendlela ezilungileyo zokuphucula amava okhenketho lwasekuhlaleni kunye nefuthe lezoqoqosho."
Phakathi kwemisebenzi yeCCTN kukukhuthaza kunye nenkxaso yezicwangciso zophuhliso lwengingqi kwi-CBT, ukubonelela ngegalelo, kunye nokucebisa imisebenzi kunye nezenzo ngenjongo yokuphucula ukubonakala kunye nexabiso le-CBT njengemveliso yezokhenketho yengingqi, kunye nokutshintshiselana ngamava amalinge esizwe nawengingqi.
I-NASA Earmark ye-28 yezigidi zeedola kwimisebenzi eNtsha yoPhando
Inyikima eyomeleleyo inyakamisa isiqithi saseIndonesia...
IJury ukuva inqwelo moya yeAmerican Airlines...
Wamkelekile kwakhona kwi-IMEX yaseMelika ngoku Usuku nje olunye kude
ISt. Maarten: iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo azidingi ...
Ukusebenza ngokukhuselekileyo kweenqwelomoya zase-Ethiopia kumda?
I-Pakistan Airlines imisa iinqwelomoya zaseKabul emva kweTaliban ...
Ukutshintsha iiJets zokulwa zaseKhanada ngeziNtsha